YEYINTNGE(ကနေဒါ): ငုံ့ခံလိုက်ရင် ကျနော်တို့ဟာ သစ္စာဖောက်ပဲ။
၁။ ဒီပွဲဟာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့ လူထုထောက်ခံမှု အကျဆင်းဆုံးပွဲပါပဲ။ အရင်က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်တပ်ရဲ့ ဘတ်ဂျက်ဟာ KNU လိုအဖွဲ့နဲ့ ယှဉ်ရင်တောင် အဆမတန် များလွန်းတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒီဘတ်ဂျက်တွေဟာ ဗမာပြည်သူတွေဆီကနေ ဂုတ်သွေးစုတ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေပါပဲ။
အခုတော့ အတော်များများက လုံးဝလက်မခံဘဲ ကန့်ကွက်နေကြပြီမို့ စစ်တပ်အနေနဲ့လည်း ဘတ်ဂျက်တွေ အများကြီးထိခိုက်ပါတယ်။ တဖက်မှာ နိုင်ငံတကာမှာ ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေပါ ပိတ်မိကုန်တော့ စစ်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုလုံးမှာပါ ရှုံးနေရတာပေါ့။
မိတ်ဆွေနည်းနည်းနဲ့ နေဖို့ ကြိုးစားထားတယ်ဆိုတာ ဆိုက်ဝါးသက်သက်ပဲဆိုတာ အရာမထင်လိုက်တဲ့လော်ဘီကြေးက သက်သေပြနေပါတယ်။ အကြမ်းဖက်တပ်ဟာ ငွေကြေးအခက်အခဲ ကြီးကြီးမားမား ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
ဒီကြားထဲမှာ လူတွေ ရာနဲ့ချီပြီး စစ်တပ်ကနေ ထွက်ပြေးနေတာပါ ပေါင်းလိုက်ရင် သူတို့မှာလည်း အင်အားလျော့နေတာ သေချာပါတယ်။
၂။ ပြည်သူလူထုရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်ဟာ အရမ်းမြင့်မားနေပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက အကြမ်းဖက်တပ်က ဆိုးရွားတဲ့ကိုင်တွယ်ပုံတွေကြောင့် ညှိနှိုင်းလို့ ရတဲ့အခြေအနေကို ကျော်လွန်ခဲ့ပြီ။
တကယ်လို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ လောက်က အန်တီစုတို့ ပြန်လွတ်ခဲ့ပြီး အာဏာမသိမ်းခင် အစလောက် ပြန်ရောက်ခဲ့ရင် လူထုက လက်ခံနိုင်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ အခုကတော့ ကျော်သွားပြီ။ ခုဆိုရင် တဖွဲ့ဖွဲ့က အလုံးစုံပျက်သုန်းမှပဲ ကိစ္စက ပြီးတော့မှာပါ​။
ဒါကြောင့် အကြမ်းဖက်တပ်ဟာ အာဏာတည်ဆောက်ရေးအတွက် အများကြီးလုပ်နေရလို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဘာမှလုပ်ချိန်မရသေးဘူး။
၃။ အခုဆို ရန် ငါ စည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ ဒီတော်လှန်ရေးပြီးရင် လောက်ကောင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို ထိန်းချုပ်ရဖို့ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဒီလူတွေရဲ့ ကုတ်သွေးစုတ်ထားတာတွေကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းလို့ ရသွားနိုင်တဲ့အနေအထားပဲ။ ကျနော်တို့ ရှုံးရင် ကျနော်တို့က နိုင်ငံသစ္စာဖောက်။ သူတို့ ရှုံးရင် သူတို့က နိုင်ငံသစ္စာဖောက်။
သူတို့က အွန်လိုင်းပဲ ထောက်ခံရဲကြသူ။
ဘယ်သူက ပိုပြီး နိုင်နိုင်မလဲ မေး?
၄။ ကျနော်တို့ နိုင်ရင် အများကြီး ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ ပျက်စီးသမျှကို အကြမ်းဖက်တပ်အနွယ်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ လျော်ကြေးပေးလိုက်ရုံပဲ။ အေး သူတို့နိုင်ရင်ရော တိုင်းပြည်အခွံပဲရမယ်။သူတို့က ဆုံးရှုံးစရာတွေ ပိုကြီးတယ်။ ကျနော်တို့က အသက်မှတပါး တခြား မရှိဘူး။ သူတို့က ပြိုကွဲနေပြီဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးကိုပဲ အမွေဆက်ဆံရမှာ။ ကျနော်တို့က နိုင်ငံတကာက ဂုဏ်ယူတဲ့နိုင်ငံကိုအမွေဆက်ခံရမှာ။
၅။ လက်ဗလာနဲ့ သေရဲတဲ့သူတွေရဲ့ သတ္တိကို သူတို့ ကြောက်ကြရမယ်။
သူတို့ ဝိုင်းခံရတဲ့အချိန် ဘယ်လိုကြောက်ကြလဲ? ကျည်ကုန်တဲ့အခါ ဒိုင်းတွေနဲ့ ငိုနေတာတွေ၊ ဒါတွေကြည့်ရုံနဲ့တင် လုပ်နိုင်စွမ်း မတူတာပိုပြီး သိနိုင်တယ်။
ကျနော်တို့က သူတို့ထက် အဆပေါင်းများစွာ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ သွေးနဲ့ရင်းပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရထားပြီးပြီ။ ကျနော်တို့ ငုံ့ခံလိုက်ရင် ကျနော်တို့ဟာ သစ္စာဖောက်ပဲ။ အဆုံးသတ်ထိ တိုက်ပွဲဆင်နွဲကြမယ်။